အမေးအဖြေ | Layma's World
Posted on November 24, 2008 by layma
ဘာလို့ရန်မဖြစ်တာလဲ
ရန်ဖြစ်ရတာ ပင်ပန်းလို့ 
၅ နှစ်ပြည့်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ မှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲ
သူ့ ဆီက လက်ဆောင်တစ်ခုခု လိုချင်တယ်…
ကျွန်မကပဲ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် …
တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတာကတော့ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရယ် … ။ ။
Filed under: Personal, Seasonal Post |
« ကမ်းနား သစ်ပင် မုန်းကြည့်ပါသည် »
THS, on November 24, 2008 at 9:05 pm said:
မင်္ဂလာသက်တမ်း(၅)နှစ်ပြည့်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့ ရွှေလက်တွဲခိုင်မြဲလို့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွင်စရာ ကောင်းတဲ့မိသားစု ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် အစ်မကြီးရေ 🙂 😀
mtj, on November 24, 2008 at 9:24 pm said:
ငါးနှစ်ပြည့်မှသည် ရွှေရတု စိန်ရတု တိုင်အောင် ပြီးပြည့်စုံသာယာတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် လေးမရေ………..
ပရိသတ်ကြီးကလဲ ယုံပါတယ်ဗျ 😛
လွမ်းလုင်, on November 25, 2008 at 1:05 am said:
ငါးနှစ်ပြည့်မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် “တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်” လို့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဟစ်အော်နိုင်ပါစေ… အဟတ်ဟတ်… စတာပါ အစ်မရာ… ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…
သီဟညိမ်း, on November 25, 2008 at 1:26 am said:
မင်္ဂလာသက်တမ်း ၅ နှစ်မှစပြီး အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေ
MhawSayar, on November 25, 2008 at 4:26 am said:
လန်းတယ်ဗျာ. အခုတစ်လော ပို့စ် အတော်များများ Feed ကနေ ယူဖတ်ဖြစ်နေလို့. အိမ်တိုင်ယာရောက် မရောက်ဖြစ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ဒီတစ်ပုဒ်ကိုတော့ အစ်မ အတွက်ရော၊ ကောင်းကင်ကြီး အတွက်ပါ ဆုတောင်းရင်း ဒီအထိလာ ပြီး မှတ်မှတ်သားသား မှတ်ချက်ရေးသွားပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒီ့ထက်မက နားလည်ချစ်ခင်ကြတဲ့ ၊ သာယာ၊ အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုဘဝကို ရာစုနှစ်များစွာတိုင် ရိုးမြေကျ တည်ဆောက် နိုင်ကြပါစေဗျာ.။ 🙂
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်, on November 25, 2008 at 4:43 am said:
(၅) နှစ်မှသည် နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်..
ပရိသတ်ကြီး ယုံပါတယ်.. 🙂
nhn, on November 25, 2008 at 7:39 am said:
ကဗျာလိုခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ် လေးမရေ
ပုံရိပ်, on November 25, 2008 at 9:42 am said:
မလေးမရေ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။ ငါးနှစ်မှ အနှစ်တစ်ရာ တိုင်ပါစေ။
သားကြွက်, on November 25, 2008 at 4:39 pm said:
လုပ်ဇတ်မဟုတ်မှန်းသိပါတယ် စိုင်းစိုင်း ကြီးတော် ဒေါ်လေးမရေ့ 😛 ကောင်ကင်ကြီးနဲ့ရတုအဆက်ဆက် ရွှေလက်တွဲလို့ဆံဖြူသွားကြိုးချစ်နိုင်ကြပါစေ ………….။
သားကိုလည်း တစ်ယောက်လောက်ရှာပေးးးးးး ဒါပဲ ဂလောက် 😀
မှတ်ချက်။ ။ ဘလော့တွေ ၀င်မရလို့လူကြုံပြောပေးပါ ဦးကြွက်ကြီး ၊ကိုတင့် ၊ကိုကျန် ၊ မီ ၊မွန် နဲ့ဝေလေးတို့ ကို သတိရကြောင်းးး လူကြုံခ နောက်မှ မုန့် ဝယ်ကျွေးမယ် ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့, on November 25, 2008 at 4:52 pm said:
တစ်ကယ်ပဲ တစ်ခါပဲ ၇န်ဖြစ်ဖူးတာလားဟင်..
ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာနစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါစေနော်.. အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေ.. မြေးတွေမြစ်တွေတီတွေကျွတ်တွေ.. အများကြီးနဲ့..
sin dan lar, on November 25, 2008 at 6:21 pm said:
တသက်လုံး…. အဘိုးကြီးကိုကောင်းကင်ကို အဘွားကြီး မလေးမ က မောင်တွေ ဘာတွေခေါ်နိုင်ပါစေသော်ဝ်
Anonymous, on November 25, 2008 at 10:44 pm said:
ရွှေရံတဲ့ မြ ပမာ
ဝေယံ နဲ့ လစန္ဒာရယ် …
အဲ့ဒီ ချစ်စရာ့ နွံထဲ
သမုဒယ လွန်ဆွဲလို့ … ။
ဒွန်တွဲကာ ထာဝရ …
မြဲစေ တည်စေသောဝ် … ။
PS : မိမွန် ဘာလာရေးမလဲ ကြည့်ဦးမယ် ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ယောင်းမရေ့ …. 🙂
ညိမ်းညို, on November 25, 2008 at 10:58 pm said:
တခါပဲရန်ဖြစ်ဖူးတာ သိပ်တော်တာပဲ အစ်မရော အစ်ကိုရော
၅ နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် သေတပန်သက်တဆုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ် မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
သားသားမီးမီးတွေ ရတဲ့အထိ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားအရွယ်ထိတိုင်
“တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်” လို့
ကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာ ဟစ်အော်နိုင်ပါစေဗျား 😛
ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ အရင်နှစ်ကလဲ တခါကြည်နူးအားကျရတယ်ဗျ
အစ်မလေးမအမှတ်တရကျွေးတဲ့မုန့်တွေတောင် ကျန်ပါဦးမလားမသိ 🙂
ကြောင်မျိုးလေး ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးကို အလုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့လေ
SoeMoe, on November 26, 2008 at 6:42 am said:
၅နှစ်အတွင်းမှာရန်တစ်ခါဘဲဖြစ် ဘူးတယ်ဆိုလို့ အားကျမိတယ်..။
အစ်ကိုကြီးနဲ့ မမ..တသက်တာထာဝရရွှေလက်တွဲလို့ တည်မြဲပါစေ..။
ShwunMi, on November 26, 2008 at 10:35 pm said:
.. အိုး.. ငါးနှစ်တောင် ရှိပြီပဲ .. ဆက်လက်ပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ။
လက်ဆောင် ပေးလည်းပေး ရလည်း ရပါစေ =)
မိ, on November 27, 2008 at 3:45 pm said:
Happy Anniversary ! ( 22.11.08 )
Love U n Miss U . Pass my regards to ur family. Don’t forget to treat me naw. 😛
ပန်ဒိုရာ, on November 28, 2008 at 5:39 am said:
တခါရန်ဖြစ်တယ်ဆိုလည်း ချစ်လို့ကျီစယ်ကြတာပဲ ဖြစ်မှာပါ
သက်ဆုံးတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲနိုင်ကြပါစေ။
မွန်, on November 28, 2008 at 9:04 am said:
ငါးနှစ်ပြည့်တဲ့လား i envy u,
i jealous u ဟားဟား စတာ မမ
နေပါဦး မကျေနပ်တာကို ကျေနပ်အောင်ဘယ်လိုနေလိုက်သလဲ
အဲဒါကို သိချင်ပါတယ် ဖြေကြားပေးပါ
lay-ma, on November 28, 2008 at 1:32 pm said:
ဆုတောင်းပေးတဲ့… ဘိုတင့်.. ကိုအတာ… ဘိုလွမ်း.. သီဟ… မှော်ဆရာ.. ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်….. ပုံရိပ်… သားကြွက်.. မလေး… sin dan lar …. ဘိုညိမ်း.. စိုးမိုး…မပန်…
ကဗျာလို ဖတ်သွားတဲ့ ကညိုထက်နဲ့ကဗျာရေးပေးသွားတဲ့ ယောင်းမ …
မအားပေမယ့် မမေ့တဲ့… မိ… ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ။ ပေးတဲ့ဆုတွေ ပြည့်ရပါစေ…။
မွန် မေးတာ ဖြေပါ့မယ်… မကျေနပ်တာကို ကျေနပ်အောင်ဆိုတာ.. အမျိုးမျိုးလှည့်တွေးပြီး နားလည်ပေးလိုက်တာကို ပြောတာပါ..။ ဥပမာ.. အော်သူမအားလို့ ပဲ.. သူအလုပ်များနေတာကိုး… သူ့ အကျင့်ပဲလေ… အဲလိုမျိုးပေါ့…။
ဝေလေး, on November 28, 2008 at 10:50 pm said:
ငါးနှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်သောမိသားစုလေးဖြစ်ပါစေနော် မမ…
အစ်ကိုတော် မောင်မျိုး အလုပ်ပေးသွားတယ်.. ဟဟ
မုန့်များများဝယ်ကျွေးခိုင်းလိုက် …. 😀
nu-san, on November 28, 2008 at 11:01 pm said:
လေးမရေ.. ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. နောက်ဆုံးက စာဖတ်သူကို တခုခုပြောခဲ့ပါဦးဆိုတာလေး သဘောကျတယ်… 🙂
လေးမနဲ့ ကောင်းကင်ကြီးတို့ ၅ နှစ်မြောက်မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ.. ကောင်းကင်ကြီးပြီးတော့ ကောင်းကင်လေးတွေ ဘယ်တော့လာမှာလဲ.. 🙂
sync~, on December 27, 2008 at 11:15 pm said:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံယောဇဉ်တွေကို မြင်သာပါတယ်။
~~သံယောဇဉ် သံယောဇဉ် လူကိုအရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်စေတယ်
ဒီသံယောဇဉ်…. ဒီသံယောဇဉ်…. သံယောဇဉ်~~